- အထင်ကြီးလေးစားစရာ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့သူဆိုရင် ဘယ်နေရာရောက်ရောက်၊ ဘယ်သူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့၊ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ညီတဲ့ စိတ်ရဲ့ ရိုသေလေးစားမှုကို ရမှာသေချာတယ်။
- “အတွေးအခေါ် အမြော်အမြင်ကြီးပြီး လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ ပီပြင်ပြတ်သားတဲ့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေရဲ့ လက်ထဲမှာ ကမ္ဘာကြီးကို စိတ်ချလက်ချ အပ်နှံထားခဲ့ချင်တယ်ကွာ” ဆိုတဲ့ လူကြီးတချို့ မျှော်လင့်နေတဲ့စိတ်။
- မျှော်လင့်ချက် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ တွေ့ကြုံလိုက်ပြီဆိုရင် ပစ်စလက်ခတ်၊ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်၊ ကျွမ်းထိုးမှောက်ခုံ ဖြစ်သွားတဲ့ စိတ်အနေအထား။
- ဘုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့ ခေတ်တွေတုန်းက ဘုရင့်အမိန့်တော် ချမှတ်လိုက်ပြီဆိုရင် အမိန့်တော်မြတ်အတိုင်းပါ ဘုရားလို့ ဖြေပြီးတာနဲ့ ချမှတ်တဲ့ အမိန့်အတိုင်း အလွဲအချော်မရှိ၊ တာဝန်ကျေကျေ၊ အတိအကျ ဆောင်ရွက်တဲ့ စိတ်အဓိပ္ပာယ်။
- ရိုသေကြောင်း၊ အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း၊ လေးစားစွာထောက်ခံပါကြောင်း၊ အဓိပ္ပာယ်ပါဝင်နေတဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။
- အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ အသက်ရှင်နေခြင်းဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ဖြုန်းတီးရာရောက်နေတဲ့ စိတ်အဓိပ္ပာယ်ကို ဖြစ်စေတယ်။
- ခန္ဓာကိုယ် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေထဲက ဦးနှောက်ရဲ့ သဘာဝတာဝန်ထဲမှာ စဉ်းစားတွေးခေါ် မြော်မြင်ခြင်း အလုပ်တွေ ပါဝင်နေတယ်လို့ လက်ခံထားကြတယ်။ လူ့လောကထဲက လူလူချင်း အဆက်အသွယ် ပြုလုပ်နေကြတဲ့နေရာမှာ စဉ်းစားတွေးခေါ် ဆင်ခြင်သုံးသပ်တဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ အရည်အချင်းကို အဓိကထားပြီး အသုံးချကြတယ်။
- လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲက လူလူချင်း ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ လိုက်လျောညီထွေ အဆင်ပြေချော့မွေ့ဖို့ မာနစိတ်၊ မတူသလို မတန်သလိုစိတ်၊ ဘ၀မြင်တဲ့စိတ်၊ ထောင်လွှားတဲ့စိတ်တွေ အကုန်လုံးကို ဖယ်ရှားပြီး နှိမ့်ချ ဆက်ဆံပေးတဲ့စိတ်။
- ပြဿနာတစ်ခုခု ဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို စဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာ “ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ သူပဲဖြစ်ဖို့ များတယ်။”
ဒါများလား? ဟိုဟာများလား? စတဲ့ တိကျသေချာမှု မရှိသေးတဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်အနေအထား။
- “ ဒါမှ တကယ့် တိကျသေချာတဲ့ အဖြေပဲ! ” လို့ ရရှိတဲ့အဖြေကို အမှန်အဖြစ် လက်ခံယုံကြည်သွားတဲ့ စိတ်အဆင့်။
- တစ်စုံတစ်ယောက်ကပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းဟာ လူတချို့အတွက် အမိန့်တစ်ခုလို အတည်ဖြစ်သွားစေတဲ့ စိတ်အဆင့်။
(သြဇာတိက္ကမ ကြီးမားတဲ့သူတွေ သြဇာရှိတဲ့ စိတ်အဆင့်။)